Amamuvi e-3D ongawabuka ku-PS4 VR | Iforamu yeselula
Amamuvi we-3D ongawabuka ku-PS4 VR
UDaniel Terrasa | 18/11/2021 19:00 | Internet
Ngemva kokufika ngempumelelo kwe Sony Emhlabeni wemidlalo yento engekho ngokoqobo, kwaba yindaba yesikhathi ngaphambi kokuba ngisebenzise lezo zinsiza ukuze ngikwazi ukubuka amamuvi e-3D ku-PS4 VR. Okuhlangenwe nakho kuyinto engakholeki neze. Kulokhu okuthunyelwe sizokuchaza konke odinga ukukwazi ukuze ujabulele. Kusukela ekulungiseni ama-headphones ukuya ochungechungeni lwamaqhinga athakazelisayo.
Ngaphezu kwayo yonke imisebenzi yayo yokudlala esesiyazi kakade, i-PlayStation VR iphinde inikeze ngomsebenzi othize wokubuka amamuvi. Ingabe yena Imodi ye-Kinematic, isixazululo esisebenziseka ngezindlela eziningi kangangokuba siwusizo kokubili ukusetshenziswa emidlalweni ye-PS4 ngaphandle kwento engekho ngokoqobo kanye nasekuphequluleni i-inthanethi nge-2D. Futhi, ngaphezu kwakho konke, ukubuka amavidiyo ento engekho ngokoqobo nge-3D.
Phakathi kwezinye izinto, le modi isinika a usayizi wesikrini othuthukisiwe, nkulu kakhulu kunanoma iyiphi ithelevishini evamile. Ngaphandle kokwesaba ihaba, singasho ukuthi ifana ne-cinema ye-IMAX, kodwa ngosayizi wesikrini ofanele kanye nokuhlukaniswa okuphelele. Umqondo uwukuthi sizizwa sengathi singaphakathi nangaphakathi kwehholo lebhayisikobho. Okuthile okufana nalokho okuhlongozwayo ngokwesibonelo I-Netflix VR.
Kepha ngaphambi kokuthi uqale ukujabulela lokhu okwenziwa yi-3D okumangalisayo nokuthola imodi yokubuka ehamba phambili, kuyadingeka ukuthi wenze izinguquko ezithile:
1 Uyisetha kanjani imodi yesinema ku-PlayStation VR
2 Amamuvi we-3D ongawabuka ku-PS4 VR
2.3 INkosi yezindandatho
2.5 Ipaki yeJurassic
Uyisetha kanjani imodi yesinema ku-PlayStation VR
Imodi yesinema ye-PlayStation4 kulula kakhulu ukuyimisa. Okufanele sikwenze ukuvula ikhonsoli bese sixhuma ama-headphone. Ukwenza lokho nje imenyu ye-PS4 izovela ngesibukeli se-VR. Lapho sizothola izinketho zokulungisa ikhwalithi oyifunayo lapho sibuka amafilimu esiwathandayo
Into yokuqala okufanele uyazi ukuthi le modi isivumela ukuthi sibuke amamuvi ento engekho ngokoqobo osayizi besikrini abathathu kwehlukile:
Encane (117 amayintshi).
Okumaphakathi (163 amayintshi).
Okukhulu (226 amayintshi).
Ukuze ulungise lawa masayizi wesikrini, kumenyu yezibukeli kufanele siqale siye kokuthi Izilungiselelo, bese sifaka Amadivayisi, sikhethe i-PlayStation VR bese ekugcineni sikhetha Imodi Yesinema.
Ithiphu elincane: nakuba isibalo esingama-intshi angu-226 silinga kakhulu (ngokusho kuka-Sony, njengokuhlala phambili kumugqa wethiyetha), kubalulekile ukwazi lokho. hhayi njalo "okukhudlwana" kusho "okungcono." Ukuxhumana kuphambene ncamashi: uma usayizi wesikrini umkhulu, ikhwalithi yesithombe iba yimbi kakhulu. Ungalindeli izinga lekhwalithi ye-Blu-Ray ngalo sayizi. Ngaleso sizathu sincoma ukukhetha amayintshi angu-163.
Ungawabuka kanjani amamuvi e-3D ku-PS4 VR
U-Sony ukhiphe izibuyekezo ezimbalwa kuhlelo lokusebenza lwe-Media Player lwekhonsoli kusukela yethulwa. Ngenxa yalokho, ungakwazi okwamanje ukujabulela izinhlobo ezahlukene zokuqukethwe nge-PSVR. Ngakho-ke, singabuka ama-movie ento engekho ngokoqobo amafomethi njenge-MKV, AVI, MP4, MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD, JPEG noma BMP.
Mayelana nekhwalithi yomsindo, u-Sony ulungise ukushoda okuphawulekayo kokuqala, lapho ama-headphones ayengakwazi khona dlala i-3D Blu-Rays. Konke kulungiswe ngesiqephu se-PlayStation 4.50, esethule izinguquko ezimbalwa ezibalulekile, okuhlanganisa nokubuyekezwa kwemodi yesinema. Izinga lokuvuselela elingu-120Hz liphinde lafakwa kosayizi besikrini abancane nabamaphakathi. Akulona ushintsho oluncane, njengoba livumela umsebenzisi ukuthi abuke amavidiyo e-PlayStation VR 3D (athengiswa cishe ama-euro angu-300) isikhathi eside ngaphandle kokuzwa ikhanda elibuhlungu, isiyezi nokunye ukungaphatheki kahle.
Yebo, ukuze ujabulele lokhu okuqukethwe kuyadingeka ukusebenzisa imemori ye-USB noma ugcine isibuyekezo kuseva yemidiya yasendaweni, ngoba ayikwazi ukugcinwa ngqo ku-PS4. Okungenani okwamanje.
Kumele sengeze kukho konke lokhu ukuthi nge-PlayStation VR singajabulela namavidiyo aqoshwe ngama-degree angu-360. Nezithombe ezithathwe ngekhamera ye-omnidirectional. Sizokwazi futhi ukudlala noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe okuhambisanayo kusuka kudivayisi enamathiselwe.
Kodwa masingalahlekelwa umbono wesihloko sokuthunyelwe: I-cinema ye-3D neqiniso elibonakalayo. Leyo impahla enhle ye-PS4 VR ngale kwemidlalo yevidiyo, insimu yonke yamathuba esiqala ukuwathola manje.
Njengoba noma iyiphi imuvi ye-4D etholakala ku-Blu-Ray ingabukwa ku-PS3 VR, ngokusobala uhlu alupheli. Kodwa-ke, kunezihloko ezithile ezifanele kakhulu lokhu kuzizwisa. Senze a Ukukhethwa kwe-movie okubonakala sengathi kuqoshwe ngenhloso kule nkundla. Kukhona ezinye ezineminyaka ethile ubudala, kodwa izici zazo zizenza zilungele le modi yesinema. Ngisho noma usuwabonile vele kumamuvi noma ku-TV, sikukhuthaza ukuthi uwabuke futhi futhi uthole umehluko:
I-Avatar: enye yamamuvi ahamba phambili e-3D ongawabuka ku-PS4 VR
Angikwazi ukucabanga ngesiphakamiso esingcono kunalesi sokuhlola isimangaliso sokubuka amamuvi e-3D ku-PS4 VR. Ekuhlelweni kwezithombe ze avatar Kusetshenziswe amasu amaningana emiphumela yokubukwa emisha, engakaze ibonwe ngaphambili. James Cameron, umqondisi, ukhethe izinhlamvu ze-photorealistic ezenziwe ngekhompuyutha, ezidalwe kusetshenziswa ubuchwepheshe obusha bokuthwebula izithombe ezinyakazayo.
Entsha ifake isistimu entsha yokukhanyisa izindawo ezinkulu njengehlathi lasePandora kanye nendlela ethuthukisiwe yokuthwebula isimo sobuso.
Abakhiqizi be-Avatar bathele ifilimu emangazayo eyizigidi ezingama- $ 237, nakuba ikhule ngokuphindwe kashumi ehhovisi lebhokisi. Impumelelo emangalisayo ngaphandle kokungabaza. Le filimu, ikude nokuphelelwa yisikhathi, nanamuhla iseyigugu okufanele ulijabulele ngokuphindaphindiwe. Ikakhulukazi ku-3D.
Amamuvi we-3D ongawabuka ku-PS4 VR: Amandla adonsela phansi
Enye i-movie enhle kakhulu yokuzwa i-vertigo yokucwiliswa kwezinzwa kwe-3D ku-PS4 VR Gravity (2013). Yaqoshwa ekuqaleni ngefomethi yedijithali, yadluliselwa kufomethi ye-3D enqubweni yokukhiqiza ngemuva.
Kulabo abangakayiboni, iyinto ethokozisayo emangalisayo ngengozi eyenzeke ku-Explorer ye-shuttle emkhathini wokuzungeza Umhlaba. Abalingiswa abakhulu UGeorge Clooney noSandra Bullock, Bathole inqwaba yemiklomelo ngokudlala kwabo. Kungashiwo okufanayo ngemiphumela yayo ekhethekile kanye nobuchwepheshe obusetshenziswa ekukhiqizeni kwayo.
KwakunguJames Cameron ngokwakhe oweluleka umqondisi Alfonso Cuarón ekusetshenzisweni kobuchwepheshe obusha bedijithali ekwakhiweni kwefilimu. Ngemva kombukiso wokuqala, umqondisi we-Avatar wamemezela ngokumangala ukuthi lena ifilimu yasemkhathini engcono kakhulu eyake yenziwa. Amandla ayo okubukwayo amangalisayo aphindaphindeka uma ebhekwa eqinisweni elibonakalayo.
Ingqikithi Yokuzizwisa Kwe-3D Egxilile: Inkosi YamaRings
Ngobuchwepheshe bento engekho ngokoqobo kuphela lapho singakwazi ukuya eMhlabeni Ophakathi, izintaba ezimnyama zaseMordor noma amagquma aluhlaza aseLa Comarca. Ngempela, Indaba yeNkosi yamaRings ngesinye seziphakamiso ezifanelekile zokuzithokozisa ngawo wonke umfutho nge-PS4 VR.
Kuncane okusha okungezwa mayelana nomsebenzi omkhulu JRR Tolkien kanye nokuzivumelanisa kwayo ne-cinema ngesandla se Peter Jackson. Yebo, singakhuluma ngamasu amasha kanye nemiphumela ebonakalayo yedijithali esetshenziswa ekukhiqizweni kwalawa mafilimu, akhanya nakakhulu uma siwabona ku-PS4 VR.
Ukukhulunywa okukhethekile kwemisindo. Kusukela ekubhongiseni kwama-orcs kuya ekuhlebeni kwe-Gollum, izindlebe zethu zizosiyisa kuzo zonke lezo zilungiselelo ezinhle, zisinikeze umuzwa ongenakuqhathaniswa.
Amamuvi we-3D ongawabuka ku-PS4 VR: The Avengers
Yeka umqondo omuhle wokuphindela emanzini I-Venagdor saga eqinisweni elibonakalayo! Izihloko ezine ochungechungeni (I-Avengers, The Age of Ultron, Infinity War ne-Endgame) zakhiqizwa nge-3D, zajabulisa abalandeli be-Marvel nabalandeli bezenzo namafilimu amnandi.
Yingakho nje i-PS4 VR iyithuba elihle lokuphinda ujabulele izikhathi ezinhle zesaga esinemali eningi kakhulu yeminyaka yakamuva esikrinini esikhulu. Okuhlangenwe nakho okuthuthukisiwe.
I-Jurassic Park, ifilimu ebabazekayo engaphumi esitayeleni
Okokugcina, okwakudala okunosonhlamvukazi, okulungele ukuba nolwazi nge-3D nge-PS4 VR. Ipaki yeJurassic yakhululwa ngo-1993, cishe eminyakeni engamashumi amathathu edlule. Kodwa-ke, ingenye yamafilimu ayindilinga (ama-sequel ngesinye isihloko) umuntu angakhathali ukuwabona. Ingxubevange yokuzijabulisa, inganekwane yesayensi kanye nefilimu esabekayo engalahlekelwanga nelilodwa ithonya layo langempela naphezu kokuhamba kwesikhathi.
Iqiniso elibonakalayo lizoletha ubukhazikhazi esihamba phakathi kwama-dinosaurs. Sizokuzwa ukuba khona kwakhe, okuthakazelisayo nokusongelayo, eduze kwethu, ephila kanje enye yezidalwa ezinkulu zikaSteven Spielberg kumuntu wokuqala. Itshe eliyigugu abalandeli be-movie abazokwazi ukulijabulela ngendlela ehlukile.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Internet » Amamuvi we-3D ongawabuka ku-PS4 VR
Ungaskena kanjani amakhodi e-QR kuselula yakho ngokushesha
Iyini i-BIOS futhi ingeyani ku-PC yakho